Dashboard Google Analytics 5 izay tsy hampatahotra anao | Martech Zone
Google Analytics dia mety hampihorohoro ny mpivarotra maro. Amin'izao fotoana izao dia samy mahalala ny maha-zava-dehibe ny fanapaha-kevitry ny angon-drakitra ho an'ireo departemantan'ny varotra eto amintsika, saingy maro amintsika no tsy mahalala izay hanombohana. Google Analytics dia fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ho an'ny mpivarotra eritreritra mandinika, saingy mety ho mora hatonina kokoa noho ny tsapan'ny maro amintsika.
Rehefa manomboka amin'ny Google Analytics, ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny manala ny anao Analytics ho faritra manaikitra. Mamorona tabilao miorina amin'ny tanjona marketing, fizarana na toerana misy aza. Ny fiaraha-miasa intra-departemanta dia zava-dehibe, saingy tsy te-hanakorontana ireo dashboard Google Analytics amin'ny alàlan'ny fanosehana ny tabilao rehetra ilainao ao anaty boaty iray ianao.
Raha te hanangana dashboard Google Analytics amin'ny fomba mahomby ianao dia tokony:
Diniho ny mpihaino anao - Ity dashboard ity ve dia ho an'ny tatitra anatiny, ny lehibenao sa ny mpanjifanao? Azo inoana fa mila mahita ireo metatra arahianao amin'ny ambaratonga mavesatra kokoa noho ny hitan'ny lehibenao ohatra.
Halaviro ny korontana - Arovy ny tenanao amin'ny aretin'andoha amin'ny fanandramana mitady ny tabilao mety rehefa ilainao izany amin'ny alàlan'ny fandaminana tsara ireo dashboardo. Tabilao enina ka hatramin'ny sivy isaky ny dashboard dia mety.
Manamboara dashboard isaky ny lohahevitra - Ny fomba tsara iray hisorohana ny korontana dia amin'ny alàlan'ny fanasokajiana ireo takelakao amin'ny lohahevitra, fikasana na anjara asa. Ohatra, mety hanara-maso ny ezaka SEO sy SEM ianao, saingy mety te hitahiry tabilao isaky ny ezaka ianao amin'ny tabilao misaraka mba hisorohana ny fikorontanana. Ny hevitra ao ambadiky ny fampisehoana ny angon-drakitra dia ny fanamaivanana ny soritr'aretina ara-tsaina, ka mipoitra eo amintsika ny fironana sy ny fomba fijery. Ny fametrahana ny tabilao ao anaty boaty arahin'antoka dia manohana an'io tanjona io.
Ankehitriny manana torolàlana vitsivitsy ao an-tsainao ianao, ireto misy ny sasany amin'ireo fampiharana azo ampiharina ho an'ny dashboard Google Analytics tsirairay (Fanamarihana: Ny sary rehetra amin'ny dashboard dia an'ny angona Google Analytics ao amin'ny DataHero):
Dashboard AdWords - Ho an'ny PPC Marketer
Ny tanjon'ity tabilao ity dia ny hanome anao topy maso ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra tsirairay na ny vondrona dokam-barotra, ary koa ny fanaraha-maso ny fandaniana amin'ny ankapobeny ary hamaritana ireo fotoana mety hanatsara. Azonao atao ihany koa ny mampifangaro ny tsy mila mandalo tsy tapaka ny latabatra AdWords. Ny habetsahan'ity dashboard ity dia miankina amin'ny tanjonao sy ny KPI mazava ho azy, fa ny metrika fanombohana tokony hodinihina dia:
Mandany amin'ny daty
Fiovam-po amin'ny fampielezan-kevitra
Vidiny isam-bola (CPA) ary mandany fotoana
Fiovam-po amin'ny fangatahana fikarohana mifanaraka
Vidiny ambany indrindra isaky ny azo (CPA)
Dashboard amin'ny atiny - Ho an'ny mari-pamantarana atiny
Ny bilaogy dia nanjary ivon'ireo ezaka SEO nataontsika amin'ny maha mpivarotra azy. Ampiasaina matetika ho milina fitarihana gen, ny bilaogy dia mety koa ny fifandraisanao voalohany amin'ny maro amin'ny mpanjifanao ary ampiasaina indrindra amin'ny fanekena marika. Na inona na inona tanjonao dia alao antoka fa mamolavola ny dashboard misy anao amin'izany tanjona izany ianao amin'ny alàlan'ny fandrefesana ny fifandraisan'ny atiny, ny fitarihana ny fivezivezena amin'ny tranokala ary amin'ny ankapobeny.
Fotoana eo amin'ny tranokala (tapaka amin'ny alàlan'ny lahatsoratra bilaogy)
Fotoam-pivoriana amin'ny alàlan'ny bilaogy misy ny bilaogy
Misoratra anarana amin'ny alàlan'ny lahatsoratra / sokajy misy ny bilaogy
Mpanoratra Webinar (na tanjon'ny atiny hafa)
Sesi-kevitra avy amin'ny loharano / paositra
Taham-pamoahana isaky ny loharano / paositra
Dashboard fanovana tranokala - ho an'ny hacker amin'ny fitomboana
Ny takelaka sy pejy fandraisana dia azo inoana fa hampiova fo - na inona na inona faritan'ny fikambanana misy anao momba ny fiovam-po. Tokony ho fitsapana A / B ireo pejy ireo ianao, noho izany dia mila manara-maso tsara ny fomba fanatanterahana ireo pejy miorina amin'ny fitsapana ireo. Ho an'ny mpivarotra saina mpiorina amin'ny hacking, ny fanovana dia manan-danja. Mifantoha amin'ny zavatra toy ny loharanom-pahalalana avo indrindra, ny tahan'ny fiovam-po isaky ny pejy, na ny tahan'ny fiakarana isaky ny pejy / loharano.
Sesiasa amin'ny alàlan'ny pejy / loharano
Vita ny tanjona tamin'ny alàlan'ny pejy / loharano
Taham-panovana isaky ny pejy / loharano
Taham-pamoahana isaky ny pejy / loharano
Aza hadino ny manara-maso tsara ireo fitsapana A / B isaky ny daty. Amin'izay dia fantatrao tsara ny antony mahatonga ny fiovan'ny tahan'ny fiovam-po.
Site Metrics Dashboard - Ho an'ny Geeky Marketer
Ireo metrika ireo dia teknika tsara fa afaka manisy fiovana lehibe amin'ny fanatsarana ny tranokalanao izy ireo. Raha te handavaka lalindalina kokoa aza dia jereo ny fomba ifandraisan'ireo metrika teknika kokoa ireo amin'ny atiny na ny metimety sosialy. Ohatra, ny mpampiasa Twitter anao rehetra dia tonga amin'ny alàlan'ny finday mankany amin'ny pejy fampandrenesana manokana? Raha izany dia alao antoka fa hamboarina tsara ho an'ny finday ny pejy fandraisana.
Famaritana ny sary
Ny fotoana lany amin'ny tranonkala amin'ny ankapobeny
KPI avo lenta - Ho an'ny VP an'ny marketing
Ny hevitr'ity tabilao ity dia ny hahamora ny fandinihana ireo metrika. Vokatr'izany dia tsy mila mifampiresaka amin'ny olona dimy isan-karazany ao amin'ny departemantananao ianao mba hahitana ny fahasalamana amin'ny ezaka marketing anao. Ny fitazonana ireo angona rehetra ireo amin'ny toerana iray dia manome toky fa tsy ho voamariky ny fanovana ny fahombiazan'ny marketing.
Mandany amin'ny ankapobeny
Mitarika amin'ny loharano / fampielezan-kevitra
Fampisehoana marketing amin'ny mailaka
Fahasalamana amin'ny corona ankapobeny
Mba hampitana ny soatoavin'ny marketing amin'ny sisa amin'ny fikambanana, dia miankina bebe kokoa amin'ny data isika rehetra. Mila mahay mamakafaka isika mba hanangonana ny angona mety, hamantatra ireo hevi-dehibe ary hampita izany amin'ny fikambananay. Izany no antony tsy ahafahanao tsy miraharaha ireo fitaovana lehibe toy ny Google Analytics, indrindra rehefa aparitanao ho manaikitra be loatra, toy ny dashboard.
Tags: mandany doka isan'androtabilao fanadihadianabounce ratetahan'ny fihenam-bidy isaky ny loharanoanalytics momba ny atinymetatra momba ny atinyanalytics fanovanamari-pahaizana momba ny fiovam-potaham-panovanafiovam-po amin'ny fampielezan-kevitrafiovam-po amin'ny fangatahana fikarohanacpamahery fo datadataherotabilao dataherofanatanterahana tanjonaGoogle Analyticskpianalytics pejy fitobianapejy fipetrahanamari-pahaizana momba ny pejy fipetrahanaambany indrindra cpamarketing kpifampiasana findayrafitra fikirakiranafamahana ny efijeryfivorianafivoriana amin'ny alàlan'ny paositrafivoriana isaky ny loharanom-baovaofotoana eo amin'ny toeranasession ho an'ny mpampiasawebinar registrants
Chris Neumann no mpanorina sy Lehiben'ny vokatra mpamokatra ao DataHero, mpamatsy voalohany an'ny serivisy serivisy Cloud BI. Taorian'ny nanampiany namorona ny habaka Big Data tao amin'ny Aster Data Systems dia nandany ny efa-taona lasa izy nitory filazalazana fiovana iray manerana ny rahona ho amin'ny rahona ary nanampy tamin'ny fametrahana ny DataHero ho toy ny sehatra BI manompo tena tena marina eo amin'ny habakabaka.
Ataovy automatique ny fitsapana sy ny fanatsarana ny fampiharana findainao amin'ny tehaka
Ny fahombiazan'ny haino aman-jery sosialy orinasa dia mitaky fitaovana SMM